Gịnị bụ ngbanwe magnetik, kedụ mkpa ọ dị na gịnị ka ọ bụ maka | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu banyere magnetik declination N’ebe ọ bụla n’elu ụwa, anyị na-ekwu maka akụkụ dị n’etiti ndọta magnetik mpaghara na mpaghara ala ugwu. Ejiri aha ezi ugwu wee mara mpaghara ugwu. Ihe ndọta a na-egosi ọdịiche dị n'etiti mpaghara ugwu na nke egosipụtara site na compass nke magnetik north.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile na ọrụ ọrụ ndọta nwere.
2 Otú Maglọ Mpụ si arụ ọrụ
2.1 Geographic na magnetik ugwu
3 Mkpa nke magnetik declination
Ọdịdị ndọta anaghị akwụsi ike na ụwa anyị. Dabere na ebe anyị nọ, uru nke a nwere ike ịdị iche. Na mgbakwunye, n'ihi ntụgharị na ntụgharị ntụgharị nke ụwa na nsonaazụ nri, uru a nke ngbanwe magnet na-agbanwe na oge oge. Anyị nwere ike ikwu na okwu a na-enyere anyị aka iwepụ esemokwu niile dị n'etiti ụdị nke ezigbo ihe kpatara ya na ihe mere eme. Ọ nwere ike inyere anyị aka inweta echiche banyere oke oke nke njehie na nghazi nghazi dị na sistemụ e ji ezi uche mee.
Okwu magnetic declination adighi egosi na enwere ike igbanwe ihe adighi anya na nhazi anyu. Anyị nwekwara ike ịchọta echiche dị iche iche, ọdịdị ala nke na-agbasasị ma hazigharị na ụfọdụ ohere iji nwee ike nyocha.
E nwere otu nyocha na imepụta nke emepụtara n'oge na-adịbeghị anya na nke mejupụtara ndị na-ahụ ihe nkiri, ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-ahụ maka ọrụ ọrụ bụ akụkụ nke mmata nke ọmụmụ postcolonial dị iche iche na nke ịchọ mma na nso nso. A na-akpọ ndị ọrụ nyocha a magnetik declination.
Otú Maglọ Mpụ si arụ ọrụ
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ka ihe ịtụnanya dị n’ụwa a si arụ ọrụ, anyị kwesiri ịmata ihe magnetism ụwa. Etwa mbara ala nwere oghere magnetik n'ihi ihe mejuputara uwa. A na-ejikarị ígwè na nickel mejuo ihe ọzọ dị n'ụwa. Mkpụrụ ndị a dị arọ dị na mmiri mmiri ọkara na mpụta nke ụwa. Nke a bụ n'ihi mmụba nke okpomọkụ na omimi na nrụgide dị elu nke a hụrụ ọla na nkume ndị a wụrụ awụ.
N'ihi mmeghari nke di n'etiti otutu ihe di n'ime ala bu ihe anakpo convection ugbu a. Mmiri ndị a na-ebugharị na uwe ahụ bụ ndị na-akpata mmegharị nke efere tectonic na ndị na-akwalite ịkpafu kọntinent. Na mgbakwunye, ha bụ ihe kpatara ikuku ndọta nke ụwa a.
Dika otutu nke ọla di oku na-aga n'ihu, a na-emeputa uzo eletrik di iche iche nke emeputara n'otu oge dika mmeghari ma meputa uzo eletrik. Nke a na - eme ka actwa dị ka nnukwu ndọta nakwa na ọ nwere okporo osisi magnetik abụọ: ogige ugwu na ọdụ ndịda. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu site na ndọta, ele ugwu dị na ndịda ma na -akpa na mpaghara ala ndịda. N'akụkụ aka nke ọzọ, magnetic south pole dị nso na ala ugwu ugwu. Ọnọdụ a nke ogwe osisi magnetik dị iche iche nke ụwa anyị bụ ihe na-egosi na mkpịsị ugwu nke agịga magnetized nke compass na-atụ aka na mpaghara ugwu. Ọnọdụ nke okporo osisi magnet adịghị adaba na nke ogwe osisi ala. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ha dị ha nso ọ bụ ezie na ha anaghị edobe ọnọdụ ọ bụla. Ọnọdụ a dịgasị iche iche kemgbe afọ nyere mmegharị dị iche iche nke ụwa.
Geographic na magnetik ugwu
Gburugburu ugwu bụ aha ejiri mara ezigbo ugwu. Ọ dabara na ntụgharị ụwa nke ụwa na ọ bụ nke na-akọwapụta na: nkwụsị nke elu ụwa. N'otu aka anyị nwere ala ala ugwu osisi na n'aka nke ọzọ ala ala n'ebe ndịda osisi.
Mgbe anyị na-ekwu okwu na magnetik anyị nwere ike ịsị na a na-akọwa magnetik north pole site na ndọta ahụ ebe compasses na-atụ. Ọnọdụ nke osisi ndọta magnet a adịghị adaba na nke ala ala ugwu ma ọ na-agagharị kemgbe ọtụtụ afọ. Ebe ọ bụ na enwere ọmụmụ na akụkọ gbasara ọnọdụ nke ndọta a, a maara na ọnọdụ ahụ dịgasị iche n'ihe dịka kilomita 1100 site na narị afọ nke XNUMX. A na-amata ma ọ bụ na-erughị na kwa afọ osisi magnetik nke ugwu na-agbanwe ọnọdụ ya site na ihe dịka kilomita 60.
Ugbu a osisi magnetik nke dị n'ebe ugwu nke 1600 kilomita site na mpaghara ugwu ugwu. Ọ dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Canada wee na-aga Russia. Anyi aghaghi ichefu na nduku magnetik nke ugwu di n’ebe ndida.
Mkpa nke magnetik declination
O bu anuku di na elu uzo nke magnetik ugwu na geographic north. Akụkụ a, n'ebe ahụ na-akpali magnetik n'ebe ugwu kwa afọ ga-enyekwa ụkpụrụ ya. Ọ bụghị naanị na ọ dị iche n'afọ ole na ole kamakwa ọ na-agbanwe ebe anyị nọ. Otu n’ime ihe mere eserese mmiri ji baa uru bụ na enwere mmụba kwa afọ ma ọ bụ belata uru nke magnetik dabere na ọnọdụ anyị nọ.
Mara uru nke magnetik declination anyị ga-amata na, ọ bụrụ na magnetik north dị na aka nri nke ezi ugwu, magnetik declination bụ nti. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na magnetọ n'ebe ugwu dị n'aka ekpe nke ezi ugwu, njupụta magnetik ga-enwe uru na-adịghị mma. Nke a bụ otu mgbe anyị nyochare eserese mmiri ka anyị nwee ike ịchọta ụkpụrụ nke okirikiri gụsịrị akwụkwọ n'etiti 0 na 360 ogo na nke ahụ na-egosi uru nke mbido magnetik maka afọ nke mbipụta nke eserese a. Na mgbakwunye, ọ na-egosiputa uru nke mgbanwe kwa afọ nke mgbatị magnet a dị ka ọrụ nke ngagharị nke ugwu magnetik.
Ọ bụrụ na anyị na-amụba kwa afọ mgbanwe nke ndọta site afọ na gafere site na mbipụta nke eserese ruo taa, anyị nwere ike ịnwe ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke emelite magnetik. N'ụzọ dị otú a, ọ dịghị mkpa na kwa afọ, anyị ga-azụta eserese ụgbọ mmiri ọhụrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere njedebe magnetik.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ndọtị ndọta